Waa la daabacay15.06.2022
Ujeedada ammaanka bulshada ee Finland waa in dadka la siiyo nolol ku filan marka ay ku jiraan xaaladaha nololeed ee kala gedisan. Waxaad taageero dhaqaale u baahan kartaa tusaale ahaan haddii aad jirrato ama aad cunug dhasho. Waxaad xaq u yeelan kartaa kaalmo, haddii aad ka shaqayso ama aad si joogto ah u deggan tahay Finland.
Xaqa u lahaanshaha anfacyada Kelada
Xaq u yeelashada kaalmooyinka Keladu waxay ku xiran tahay Finland oo si rasmi ah loo deganaado ama laga shaqeeyo
Caawimaadda ka danaysashada Kelada
Faahfaahinta dheeraadka ah ee manfacyada Kelada ka sii aqri
Halkan waxaa lagu sheegayaa ammaanka bulshada ee deegaanka ku salaysan, kaas oo ay Keladu qaabilsan tahay. Waxaa kale oo Finland ammaanka bulshada qaabilsan degmooyinka, qasnadaha shaqo la’aanta, laamaha hawgabka iyo laamaha kale ee caymisyada.
Bogga InfoFinlandi Ammaanka shaqo la’aanta waxaad ka heleysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qofka xaqa u leh ammaanka shaqo la’aanta. Nidaamka hawlgabka Finland macluumaad ku saabsan waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Hawlgab .
Keladu waxay kaalmooyin siisaa sida qoysaska carruurta leh, dadka shaqo la’aanta ah, ardayda, dadka naafada ah iyo dadka muddo dheer jirranaa ama baxnaano u baahan. Xaaladaha qaar marka lagu jiro waxaa Kelada laga codsan karaa kaalmada kharashka deegaanka ku baxa.
Haddii aad caymiska caafimaadka Finland ku jirto, waxaad heleysaa kaarka Kelada. Marka aad kaarka tusto waxaa farmashiyayaasha iyo xarumo caafimaad oo badan oo gaar loo leeyahay ka heleysaa magdhow dhinaca kharashka ah. Waxaa markaas lacagta lagaa rabo ka bixinaysaa qaynta adiga kugu soo aadday oo kaliya.
Sharciga ayaa lagu qeexay maalmooyinka Kelada sababaha lagu bixiyo. Kmarka aad codsato manfacyada, Kela ayaa soo baaraysaa in aad manfacyada xaq u leedahay. Tan waxaa saameyn ku leeyahay degitaanka joogtada ah iyo ka shaqeynta Finland. Marka ay Keladu go’aamineyso kaalmo, codsada kasta waxaa si shaqsi ah looga baaraandegayaa xaaladdiisa nololeed.
Xaaladaha nololeed iyo baahida kaalmo ee codsashadayaashu waa kuwa inta badan kala duduwan. Sidaas ayeeyna tirada kaalmooyinka iyo sababahooduba u kala bedelan yihiin. Xaaldaada si gaar ah u cadee marwalba.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaKela
Macluumaad ku saabsan ammaanka bulshadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Ammaanka bulshada ee u soo guuraha FinlandLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Macluumaad ku saabsan ceymsika jiradaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Macluumaad ku saabsan ammaanka bulshada FinnishkaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Xeerka ugu horeeya waa in haddii aad Finland si joogto ah u deggan tahay, aad heli karto mafacyada Kelada. Sharciga ayaa qeexaya waxa loola jeedo joogto u degananaashaha.
Sidoo kale ka shaqeynta Finland ayaa xaq kuu siin karta manfacyada Kelada.
Xaq ma u leedahay kaalmooyinka? Arrinta waxaa saamayn ku leh, in aad Finland u soo guurayso
adigoo ka soo guuraya waddan ka tirsan Midowga Yurub (EU) ama waddan ka tirsan aagga dhaqaalaha Yurub (ETA), Ingiriiska ama Switzerland ama
Wadamada ETA waa wadamada Midowga Yurub, Norway, Iceland iyo Liechtenstein
Waxa kale oo intaas dheer oo saameyn ku leh in aad heleyso manfacyada, in aad Finland ugu soo guureyso tusaale ahaan
sidii shaqaale ama shirkadle oo kale
arday oo kale
xubin qoys ka mid ah
shaqaale la soo diray.
Finland waxay heshiis saameeya ammaanka bulshada la gashay dalal. Wadamadaas waxay yihiin wadamada Waqooyiga ama Nordikada Mareykanka, Kanada iyo Quebec, Chile, Israa’iil, Hindiya, Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo Austraaliya. Heshiiyadu waxay saameeyaan ugu dhowaan hawlgabka. Heshiisyada qaarkood waxaa kale oo ay saameeyaan daryeelka caafimaadka. Haddii aad ka timaado dalalkaas midkood Kelada ka hubso in heshiisyadu saameyn ku yeelanayaan ammaankaada bulsho.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaFinlex
Sharciga degmo-gurigaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Macluumaad ku saabsan heshiiska ammaanka bulshada ee wadamo kala duduwan u dhexeeyaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Macluumaad ku saabsan ammaanka bulshada Finland ee loogu talagalay muwaadiniinta Midowga YurubLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Marka aad Finland u soo guurto, Kelada ayaa qiimeyneysa markasta inaad Finland ugu soo guurtay degis joogto ah oo ka duwan sida uu dhigayo sharciga ammaanka bulshada.
Haddii aan loo arko in u soo guuristaada Finland aysan aheyn mid joogto waxaad xaq u yeelan karaysaa inaad shaqadaada darteed ku hesho xaqa manfacyada Kelada.
Waxaa qiimeyn lagu sameyn karaa, in tusaale ahaan waxaad Finland ugu soo guuri kartaa si joogto arrimaha soo socda:
waxaad tahay dib u soo guure, yacni waxaad ka soo laabatay dibadda si aad u degto Finland
waxaad heysataa heshiis shaqo oo joogto ah ama wax u dhigma oo aad Finland ku sameyneyso
waxaad is qabtaan ama si kale xiriir qoys ula leedahay qof kasoo, si joogto ah u deggan Finland
Waxaa kale oo inta badan la doonayaa in ogolaanshaha joogitaanka uu shaqeynayo, haddii ay waajib kugu tahay inaad qaadato ogolaanshaha joogitaanka.
Qiimeyn guud ayaa xaaladda lagu sameynayaa. Iyadoo taas lagu saleynayana waxaa la eegayaa in degenaashuhu yahay mid joogto ah iyo in uusan aheyn.
Haddii aad Finland si ku meelgaar ah ugu soo guurtay inta badan xaq uma lihid manfacyada Kelada. Laga billaabo 1.4.2019 ardayga ka imaanaya meel ka baxsan Midowga Yurub ama Soonaha ETA wuxuu xaq u lahaan karaan manfacyada Kelada qaarkood, sida manfacyada caymiska jirada..
Marka la sameeyo go’aan ah inaad joogto u deggan tahay Finland waxaa laguu aqoonsanayaa qof Finland joogto u deggan ilaa aad:
guri rasmi ah ku leedahay halkan, islamarkaasna aad inta badan joogto halkan
aad si rasmi ah ugu joogtid sababo awgood, tusaale ahaan xiriir eheltinimo ama shaqo
Haddiise aad shaqo ka bilowdo wadan kale ama aad dibadda lix bilood wax ka badan ku maqnaato, xaqaadi manfactada Keladu waa ay dhammaan karaan. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xaaladan waxaad ka heleysaa Kelada.
Waxaa kale oo jiro kaalmooyin kale oo aadan heli karin haddii aadan Finland hadda ama horay ugu deganeyn joogto. Tusaale ahaan lacago maalmeedka waalidka ayaa waalidku heli karaan oo kaliya haddii ay deganaayeen Finland 180 maalmood kahor waqtiga loo qabtay dhalista cunugga. Haddii aad ka timid wadan kale oo Midowga Yurub ka tirsan waxaad xaaladaha qaarkood uga faa’iideysan kartaa inta aad ku jirto xilliga caymiskaada ee kuugu uruuriya wadan kale oo Midowga Yurub ka tirsan. Weydii xarunta arrimaha caalamiga ah ee Kelada:
Dibadda u guurista iyo ammaanka bulshoLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Macluumaadyada xiriirka ee KeladaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Waddamada Midowga Yurub, waddamada ETA, Ingiriiska iyo Switzerland
Haddii aad Finland uga soo guureyso shaqo darteed, waxaad inta badan mudada xiriirkaada shaqada heleysaa manfacyada Kelada haddii aad xittaa heysato heshiis shaqo oo wakhti gaaban ah.
Haddii uu mushaarkaadu yahay ugu yaraan 741,75 € bishi, waxaad xaq u yeelanaysaa manfacyada Kelada oo badan. Wax saameyn ah ma lahan, inta saacadood ee aad todobaadki ka shaqeyso ama xiriirkaada shaqadu inta uu gaarayo.
Shaqaalaha iyo ammaanka bulshada ee FinlandLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Xaqa isticmaalka turjubaanka
Haddii aadan arrimahaada Kelada uga dhammaysan karin afka Finnishka, Iswiidhishka ama Ingiriiska, Kelada ayaa turjumaad kuu qabanqaabin kartaa. Lagaagama baahna in aad adigu bixiso lacagta turjumaadda. Turjubaan waxaad dalban kartaa marka aad wacdo adeegga telefoonka ee Kelada aad toos u tagto goobta adeegga Kelada. Turjubaan waxaa saaran waajibka ilaalinta xogta dadka.
Waxaa kale oo turjubaan kuu noqon kara qaraabadaada, saaxiibkaa, haddii aad qabsanayso arrin aan saamayn ku lahayn ammaanka xuquuqdaada. Si kastaba ha ahaatee dadka ka yar 18 sano turjubaan ma noqon karaan.
Dan ka qabsashada Kelada iyo turjumaaddaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Qof kale u qabashada hawlaha Kelada
Haddii aad doonayso in qof kale uu hawlahaada Kelada kuu qabto, waxaad u samayn kartaa warqad wakiilasho ah. Qofka aad wakillatayna wuxuu kuu codsan karaa kaalmooyinka Kelada go’aannadana racfaan ayuu ka qaadan karaa.
Waxaa kale oo aad hadal ahaan u samayn kartaa wakiilasho halmar ah, tusaale ahaan khadka telefoonka.
Waalidku wuxuu qaban karaa dhammaan arrimaha cunugga 15 sano ka yar.
Qof kale u qabashada hawlaha KeladaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Bogagga InfoFinland waxaa ku jira macluumaad badan oo ku saabsan manfacyada Kelada. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogagga soo socda: